ज्योति भन्छिन ‘केटामा ‘सिक्स प्याक’ नभए पनि त्यो कुरा राम्रो भए भइ हाल्यो नी ! (भिडियो) « Pana Khabar
ज्योति भन्छिन ‘केटामा ‘सिक्स प्याक’ नभए पनि त्यो कुरा राम्रो भए भइ हाल्यो नी ! (भिडियो)
समय : 9:02 pm
छोटा पहिरन, वक्षस्थल देखाउनमा कन्जुस्याइँ नगर्ने, खुला विचार, मस्ती र मनोरञ्ज प्रस्तुत गर्न जानेकी कलाकार भनियो भने ज्योती मगरको हकमा खास फरक पर्दैन । दुई अर्थ लाग्ने गीत संगीतदेखि अनेक स्टन्टबाजीले ज्योती चर्चामै हुन्छिन् । उचाई, रुप, फिगरको हिसाबले ज्योती कुनै मोडल जस्ती लाग्दिनन् । तर हुन्छ उनकै चर्चा । मोडलका रुपमा ज्योती खोज्नेहरु पनि धेरै छन् । गायन त उनको महत्वपूर्ण अंश भइ नै हाल्यो ।
मिठो स्वरकी धनी भएपनि ज्योतीको आवरण र कपडा लगाउने शैलीलाई बढि प्राथामिकता दिइन्छ । ज्योतीले अभिनेता राजेश हमालमाथि टिप्पणी गरेकी छिन् । नेपाल आजसँगको कुराकानीमा गफिँदै ज्योतीले राजेश हमालले जवानीमा गर्नुपर्ने कामहरु गुमाएको बताइन् । के गुमाउनुभयो भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘केटा मान्छे भएर जवानीमा गर्नुपर्ने पागलपन र डेटिङ राजेश दाइले गुमाउनुभयो । उमेरमा रमाइलो नगरेर के जेन्टलम्यान बन्नु ?’ कुरालाई खुलस्त पार्दै ज्योतीले केटा मान्छे भनेको राजेश हमालजस्तो नभएर भुवन केसीजस्तो हुनुपर्नेमा पनि जोड दिइन् ।
त्यसो त ज्योतीलाई धेरैले ‘हट एण्ड सेक्सी’ को ट्याग दिने गर्छन् । नेपाली फिल्म उद्योगमा ज्योतीलाई को ‘हट एण्ड सेक्सी’ लाग्छ त ? उनले आफूलाई नायिका माला लिम्बु र नायक सबिन श्रेष्ठ ‘हट एण्ड सेक्सी’ लाग्ने बताइन् ।
त्यस्तै ज्योतीलाई मनपर्ने अरु के के कुरा छन् त ? उनी आफूलाई गीत गाउँदा नखरा देखाउन मन लाग्ने बताउँछिन् । आफू पुगेको कार्यक्रममा झडप भएको पनि केही हदसम्म आफूलाई मनपर्ने बताउँछिन् उनी । ‘सिक्स प्याक’ भएका केटा मन नपराउने ज्योती साधारण केटाहरुमा पनि के चिज राम्रो छ भनेर नियाल्ने प्रयास गर्ने गर्छिन् ।
प्रकाशित मिति २०७४ पुष २७ , बिहिबार
मलाई ठूलो झट्का लाग्यो, मेरो जीन्दगी सकियो ‘जब यूट्यूबमा आफ्नै सेक्स भिडियो देखेँ’
इजरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहुसँग बलिउड सेलिब्रेटीहरुले खिचे सेल्फी
प्रियंका चोपडाले न्यूयोर्कको सडकमा यी अभिनेतासँग गरिन् चुम्बन
बूढानीलकण्ठका भक्त अनमोल खोला सफा गर्नेदेखि आश्रममा खाना बाड्छन्
नेपाली भाषा र गीतसंगीतमा ३७ बर्ष देखि रमाएका स्विस नागरिक नेपाली झिल्के (भिडियो)
अनमोललाई हेर्न उनको निवास आसपास युवतीहरुको भीड लाग्छ
हिन्दुको सर्बोच्च गुरु शंकराचार्य हुनेक्रममा परेकी विश्वकै पहिलो नारी नेपाली चेली हेमानन्द (भिडियो)
स्वास्थ्य क्षेत्र नै तहसनहस भएपछी डा.केसीका समर्थक गगन थापा जस्ताहरुलाई सबैले थुक्नेछन
बिश्वमै पचाउनै नसकिने १० बिहे ! बुढीसंग सम्वन्धविच्छेद गरेर आमासँग विहे !
ईंटाले हानेर ढुङ्गोले फर्काउने मुसल युद्धको अभ्यास गर्दैछन
Exchange Rate for 21 January, 2018
पाँच लाख मौरी मारेको आरोपमा १२ र १३ वर्षका युवक पक्राउ
विवेकशील साझा पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य श्रेष्ठ भन्छन् -प्रतिपक्षमा रहेर जनताको कुरा राख्छौं